Pireezdaantiin Yunaaytis Isteets Doonaald Traamp fi haatii warraa isaanii Melaaniyaa Traamp qorannoo vaayrasii koronaa geggeesaniin vaayrasichi qama isaanii keessatti argamuu mirkaneeffachuu Traamp beeksisan.
Malattoon COVID-19n qabamuu isaaniif mallattoon irratti argamuu isaa battala hin beeksisamne. Maanguddoon waggaa 74 sababaa umurii fi ulfina qaama isaanin dhibee kanaaf kanneen akkaan saaxilaman keessatti ramadamu. Sababaa qajeelfammi jiru turban lamaaf akka isaan imaltuu hin deemne dhorka.
Yeroon isaan uggura manaa akka hin baaneef tolfam guyyaa isaan falmii dorgommii prezidaantummaa mormituu isaanii dimokraaticha Joo Baayiden waliin geggeessan Onkoloolessa 15 waliin walitti siqa.
Trampii fi haati warraa isaanii uummata Yunaayitid Isteetis Miliyoona 7.2 kanneen vaayiresii koronaan qabamanitti dabalaman. COVID-19 Ameerikaa keessaa uummata kuma 200 ol galaafate.
Addunyaa irraa uummati miliyoonni 34 vaayiresii kanaan yoo qabamu kanneen miliyoona tokkoo ol ta’an du’uu galmee Yuniversitii Joon Hoopkins irraa hubachuun danda’ameera.
Waaltaan to’annoo fi ittisa dhukkubootaa Yunaayitid Isteetis roobii darbe akka beeksisetti uggura imala doonii imaltootaa kan baatii bitootessaa yeroo isaa hanga Onkoloolessa 31tti dheeressee jira. CDCn akka jedhetti Bitootessa 1 hanga Fulbaana 29 yeroo jiru keessatti namoota doondii bishaan Yunaayitid Isteetis irra deemu keessa turan 3,689 COVID-19n yoo qabaman 41 immoo du’aniiru.